နိုင်ငံတကာ ဒုက္ခသည်များနေ့ ပြပွဲ မဲဆောက်၌ ကျင်းပ | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
AAR – သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← “တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်များနှင့် ပြည်သူ လူထုများ သို့ အသိပေး ကြေညာချက်”	ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့ ကွာလာလမ်ပူတွင် ကျင်းပပြုလုပ် →	နိုင်ငံတကာ ဒုက္ခသည်များနေ့ ပြပွဲ မဲဆောက်၌ ကျင်းပ	Jun 16
Posted by ရခိုင်ဒုက္ခသည်များ မဟာမိတ်အဖွဲ့ - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
နိုင်ငံတကာ ဒုက္ခသည်များနေ့ ပြပွဲ ခန်းမ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည်များရှိနေခြင်းကို နိုင်ငံတကာက ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) က ဦးစီး၍ နိုင်ငံတကာ ဒုက္ခသည်များနေ့အကြို ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ အခမ်းအနားနှင့် ပြပွဲတရပ်ကို ယနေ့ စတင်၍ မဲဆောက်မြို့တွင် ကျင်းပသည်။
UNHCR အပါအ၀င် ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ဒုက္ခသည်များအရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း NGO အဖွဲ့ ၁၃ ဖွဲ့က အဆိုပါအခမ်းအနားကို ၂ ရက်ကြာကျင်းပ မည် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ ဒုက္ခသည်များ နေ့မှာ ဇွန်လ၂၀ ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။
မဲဆောက်အခြေစိုက် UNHCR ရုံးတာဝန်ခံ Mrs YoKo Akasaka က“ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာက ထိုင်းမှာ ဒုက္ခသည်တွေ ရှိနေတဲ့အကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ရယ်၊ မသိသေးတဲ့သူတွေလည်း သိရှိစေဖို့အတွက် ဒီအစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်”ဟု ပြောသည်။
ထိုင်းအစိုးရက ထိုင်းရှိဒုက္ခသည်စခန်းများ ပိတ်မည့်ကိစ္စနှင့် ဒုက္ခသည်များကိုနေရပ်ပြန်ပို့မည့် အစီအစဉ် များမှာ လတ် တလော အခြေအနေများတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိသေးကြောင်းလည်း ပြောသည်။
“ဒီကိစ္စ ထိုင်းနဲ့မြန်မာအစိုးရတွေမှာတော့ မူဝါဒတွေရှိတယ်၊ မြန်မာဘက်မှာ အမှန်တကယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီ ဆိုရင်တော့ ဒုက္ခသည်တွေပြန်ရမှာဖြစ်တယ်၊ ပြန်ပြီးရင်လည်း နောက်ထပ်ပြန်လာစရာ မလိုတဲ့ အနေအထားတွေရှိဖို့ လိုတယ်”ဟု Mrs Akasaka က ပြောသည်။
ယခုကျင်းပသည့် အစီအစဉ်တွင် ဒုက္ခသည်များ၏ အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဟောပြောပွဲများ၊ ဒုက္ခသည်များ ထိုင်းဘက်သို့ ထွက်ပြေးလာရသည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အခြေအနေများ နယ်စပ်ဒေသများတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့်တိုက်ပွဲများနှင့် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ၏ ဘ၀များကို ရိုက်ကူး ထားသည့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များကို ပွဲစဉ်အလိုက်ပြသ သည့် အစီအစဉ်များလည်း ပါဝင်သည်။
NGO အဖွဲ့များကလည်း ဒုက္ခသည်စခန်းများအတွင်း ၎င်းတို့ဆောင်ရွက်နေသည့် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စများကို ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများနှင့်အတူ အဖွဲ့လိုက်ပြခန်းများဖြင့် ပြသခဲ့ကြပြီး ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်း များ ဖြန့်ဝေကြသည်။
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွင် နို့ဖိုး၊ အုန်းဖျန်၊ ထန်ဟင်း၊ ဘန့်ဒုံယမ်း၊ မယ်လ၊ မယ်လာအူး၊ မယ်ရာမို၊ နှင့် ကရင်နီဒုက္ခသည် စခန်း၂ ခု အပါအ၀င် ဒုက္ခသည်စခန်း ၉ ခုရှိပြီး ဒုက္ခသည် ၁၄၀၀၀၀ ခန့်နေထိုင်လျက် ရှိသည်။
၎င်းဒုက္ခသည်များသည် ၁၉၇၅ ခုနှစ် မဆလ အစိုးရလက်ထက်တွင်စတင်ခဲ့သည့် ကရင်ပြည်နယ် ဖြတ် ၄ ဖြတ် စစ်ဆင်ရေး နှင့် န၀တ၊ နအဖနှင့် လက်ရှိမြန်မာအစိုးရလက်ထက်တို့တွင် တိုင်းရင်းသား နယ်စပ်ဒေသများတွင် တိုက်ခိုက်နေသည့် စစ်ဆင်ရေးများကြောင့် နယ်စပ်နှင့် ထိုင်းဘက်သို့ ထွက်ပြေး ရောက်ရှိ လာသူများဖြစ်သည်။
Credit@ Irrawaddy News
Posted on June 16, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.	← “တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်များနှင့် ပြည်သူ လူထုများ သို့ အသိပေး ကြေညာချက်”	ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့ ကွာလာလမ်ပူတွင် ကျင်းပပြုလုပ် →	Leaveacomment
ထင်မြင်ချက် ပေးရန် Cancel reply	Enter your comment here...